प्रेमिकाले प्रेमिलाइ आईफोन उपहारमा नदिएको भन्दै सबैको सामु ५२ झापड ! पुरा भिडियो हेर्नुहोस् . .
July 6, 2019 July 6, 2019 Arik	0 Comments
प्रेमिकाले सायद प्रेमीले नयाँ आइफोन उपहारमा देलान् र सानका साथ चलाउँछु भन्ने सपना देखेकी थिइन् । आफूले सोचेको जस्तो नभएपछि प्रेमिका रिसले आँखा नदेख्ने भइन् र सार्वजनिक स्थानमा नै प्रेमीलाई ५२ पटक चड्कन लगाइन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर घटना साँचो हो । एक चीनियाँ प्रेमीले प्रेमिकालाई आइफोन नदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा हिंसा सहनुपरेको छ । प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक मार्च महिनाको २० तारिखमा चीनमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइन्छ । तर सिचुवान प्रान्तका एक जोडीले प्रेम दिवसलाई भिन्न तरिकाले मनाए । नजिकै जडान गरिएका सिसिटीभी क्यामराका साथै त्यहाँ उपस्थित मानिसले खिचेको भिडियो पछि सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरियो । उक्त भिडियोमा एक युवतीले आफ्ना प्रेमीलाई उपहारस्वरुप आइफोन नदिएको भन्दै चिच्याएर गाली गर्दै थप्पड हानेको देख्न सकिन्छ । उक्त फुटेजमा सबै झापड नदेखिएपनि पुलिसले ती व्यक्तिले ५२ बढी झापड खाएको पुष्टि गरेका छन् ।
प्रेमिकाले त्यसरी झापड हानिराख्दा पनि ती युवक केही नभनी, हलचल नै नगरी बसेको देखेर सबै चकित परेका छन् । उक्त जोडीको वरिपरि थुप्रै मानिसको भीड देखेर पुलिसले हस्तक्षेप गर्दै स्थिती नियन्त्रणमा लिएको थियो । सार्वजनिक स्थलमा त्यत्तिका थप्पड खाँदासमेत ती पुरुषले आफ्नी प्रेमिकालाई बचाउन खोजेको पुलिसले जानकारी दियो ।
← ज्योतिलाई पत्रकारले बिहेको कुरा निकाल्दा ‘डिभोर्स गर्नुस तपाईसंगै बिहे गर्छु भनेपछी…. (भिडियो)
वैवाहिक जीवनमा बाधिएपछि महिलाले येस्तो गल्ति गर्नु पापसमान मानिन्छ ! पढि सबैलाइ सतर्क गर्नुहोस् . . →
इमरानको यो निर्णयले मोदीको रुवाबासी, भारतलाई ५४८ करोड भारुभन्दा बढी घाटा पूरा हेर्नुहोस ।
July 5, 2019 sajhachautari.com 0
दिनभरी स्कुल, रात परेपछि देह व्यापार
July 16, 2019 Arjun565 0
दिदीको दुःख देखेर बहिनीले भिनाजुको गर्भ बोकिन…
July 3, 2019 sajhachautari.com 0